Ebola ee DRC: laba bukaan ah ayaa looga dhawaaqay in Goma - JeuneAfrique.com - KU SAMEEYSAAN
ACCUEIL » COMPANY »Ebola ee DRC: laba bukaan ah ayaa looga dhawaaqay Goma - JeuneAfrique.com
Ebola ee DRC: laba bukaan ah ayaa looga dhawaaqay in Goma - JeuneAfrique.com
Mas’uuliyiinta caafimaadka ee Kongo ayaa ku dhawaaqay Talaadadii in la daaweynayo labo bukaan oo ka tirsan Ebola kadib kow iyo toban maalmood oo lagu daweynayay magaalada Goma ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo, taas oo caddeyn u ah wax ku oolnimada laba molecule oo dhowaan la soo saaray. Daraasad Mareykan ah.
"Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan shaacino in afarta xaaladood ee Ebola la xaqiijiyay ee Goma, labo la daaweeyay. Farriin adag bay noo tahay in Ebola la dawayn karo. Maanta, daawooyinka ayaa jira, "ayuu yiri Professor Jean-Jacques Muyembe, isuduwaha jawaabta Ebola ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo.
"Waxaan haynaa labo daaweyn hadda, mAb114 iyo REGN-EB3. Markaa waa labadan molecule ee aan adeegsan doonno, sababtoo ah marka loo eego natiijooyinka aan helnay ilaa hadda, labadan moleekuleey waa kuwo wax ku ool ah, ”ayuu yiri khabiirka reer Kongo, oo ah khabiir ku xeel dheer dagaalka ka dhanka ah Ebola.
Koror aad u weyn oo heerka badbaadada ah
Isniintii, mas'uuliyiinta caafimaadka Mareykanka, oo maalgeliyey daraasad lagu daaweynayo cudurka Ebola, ayaa sheegay in labada daawooyin ay si weyn u kordhiyeen heerka badbaadada bukaannada ee tijaabada caafimaad ee DRC.
Qiyaastii dadka ku dhow 500 oo xogtooda la falanqeeyay (oo ka mid ah wadarta guud ee kaqeybgalayaasha 681), dhimashadu waxay ku dhacday 29% iyada oo ay lajirtay REGN-EB3 iyo 34% oo leh mAb114, si faahfaahsan oo Isniin ah Anthony Fauci, oo ah agaasimaha Machadka Maraykanka ee Cudurada Faafa iyo Xasaasiyada. Dadka aan dawaynayn, heerka dhimashada ayaa u dhexeeya 60 iyo 67%.
Labadan daaweyni waa unugyada difaaca ee monoclonal-ka ee ka shaqeeya xakameynta awoodda fayrasku ku yeelan karo unugyada kale. Waxa jiray afar moleekuleyaal loo adeegsaday daweynta bukaanka. Laba molecule waxay cadeeyeen waxtarkooda, mAb114 iyo REGN-EB3. Ma dhihi karo wax intaa ka badan, ”ayuu u sheegay AFP Dr. Celestin Ntawigenga xiriiriyaha jawaabta Goma.
Haweeney ka mid ah qalin-jabiyaha dahabiga ah oo ku dhintey Agoosto 2 gudaha Goma, Esperance Nabintu iyo wiilkiisii ​​hal-sano jir ah ayaa ku soo noqday gurigooda kadib markii ay caddeeyeen in masuuliyiinta caafimaadku daaweyn.
DRC waxaa saameeya faafitaanka Ebola tan iyo 1er Agoosto 2018. Laga soo bilaabo bishii Luulyo, afar kiis ayaa laga diiwaan galiyay Goma, oo ah caasimada Waqooyiga Kivu, taasoo sare u qaadaysa cabsida laga qabo faafitaanka cudurka inuu ku faafo magaalooyinka kale ee Kongo iyo waddamada deriska ah.
Cudur aad u faafa, qandhada dhiigbaxa ayaa durba sababtay geerida 1888, marka loo eego tirooyinkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay maamulka, taariikhdeedu ahayd Agoosto 10. Fayraska waxaa loo kala qaadaa aadanaha xayawaannada duurjoogta ah qaarkood, ka dib inta u dhexeysa bina aadamka iyada oo loo marayo xiriir toos ah iyo xiriir dhow, iyada oo loo marinayo dheecaanka jirka qofka buka.
Gabon: Maxkamadda Rafcaanka ee Libreville si ay u eegaan caafimaadka Ali Bongo Ondimba ee August 26 - JeuneAfrique.com
Claire Bahi ayaa marag ka ah: "Hooyo Tina ayaa i soo wacday, toddobaad ka hor markii aan lahadlay Arafat"